Somaliland oo maanta dooranaysa madaxweeyne cusub - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Doorashadii hore ee ka dhacday Somaliland sannadkii 2010. sawir: Barkhad Kaariye
Somaliland oo maanta dooranaysa madaxweeyne cusub
La daabacay måndag 13 november 2017 kl 08.00
Maanta oo isniin ah ayaa dalka Soomaaliland laga dooranayaa madaxweyne cusub.
Soomaaliland ayaa ah dal madaxbanaanin ku dhawaaqay kana go´day Soomaaliya inteeda kale intii ka dambeeysay dagaalki soke ee 1991:kii. Mid ka mid ah soomaalida qurbajoogta ah ee hadda ku sugan magaalada Hargeeysa ayaa ah Rooda Elmi. In kasta oo aaney haysanin kaadhka lagu codeeynayo waxeey sheegtay in ay xiise adag u hayso siyaasada xisbiyada Somaliland.
-Wax badan ayaan soo qabsanay anaga oo Somaliland ah. Waddan jira ayaan nahay, markaa waan ku faraxsanahay in ay inoo hirgasho.
Rooda Elmi oo hadda joogta magaalada Hargeeysa.
In kasta oo ay Soomaaliland haysato barlamaan, lacag iyaga u gaar ah iyo iyo basaboor gooniya, weli lama aqoonsan.
Caydaruus Aadan ayaa isaguna hadda ku sugan Soomaaliland sida uu u taageero xisbiga isagu jeclaan lahaa in waddanka hogaamiyaan, hasayeeshe ayuu sheegay in ta ugu muhiimsani tahay in ay doorashadani u dhacdo hab dimoqraadnimo ku dhisan.
-Waxaan rajeeynayaa in ay doorasho xaq oo xalaal ah dhaco, kii la doorto na lagu ixtiraamo.
Caydaruus Adan oo hadda ku sugan dalka Somaliland. laakin ku nool Sweden.
Saddexda xisbi ee ku tartamaya doorashada maanta ka dhici doonta dalka Soomaaliland ayaa ah Muuse Biixi Abdi, xisbiga Kulmiye, Faisal Ali Warabe oo ka soo jeeda xisbiga UCID iyo Abdirahman Mohammad Abdullahi oo meteleya Waddani.